Arimaha Bulshada – Page 2 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Archives»Arimaha Bulshada (Page 2)
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kusii Jeeda Gobolka Bakool
By admin on 15/07/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Wasaaradda arrimaha Gudaha dowlada Federaalka iyo Wasaaradda arrimaha Gudaha dowladaha Hoose ee maamulka Koofur galbeed ayaa ku howlan dhisida Golayaasha deegaanka, iyadoo wafdi kasocday oo hordhac u ahaa Madaxweynaha uu shalay gaaray degmada Ceelbarde ee Gobolka Bakool. Wararka haatan laga helayo degmada Ceelbarde ee Gobolka Bakool ayaa waxaa ay sheegayaan in Maanta aad loo adkeeyay […]
aldhig Ay Leeyihiin Mareykanka Oo Mar Kale La Duqeeyey
By admin on 19/06/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Gantaalka Katayuushka ayaa la sheegay in lala beegsaday Saldhig ay Maraykanka ku leeyihiin magaalladda Mosul ee Waqooyiga dalka Iraq, waana duqeyntii 2-aad eel ala beegsado wax ka yar 24-saacadood. Isbahaysiga Milliteriga Maraykanka ee ku sugan dalalka Iraq iyo Syria waxay xaqiijiyeen in saqdii dhexe ee xalay uu Gantaal kusoo dhacay Saldhig Tababar oo ku yaalla […]
Xubno ku Eedeysan Weerarkii Al-Shabaab ee Jaamacadda Gaarisa Oo Maxkamad la soo taagay
Maxkamadda magaalada Nairobi ayaa la filayaa inay soo gaba gabayso dacwad la xiriirta afar nin oo ku eedeysnaa inay kamid ahaayeen Xubno ka tirsanaa Al-Shabaab ee bishii April ee sanadkii 2015-kii weerarka khasaaraha badan dhaliyay ku qaaday jaamacadda magaalada Gaarissa ee Gobolka Waqooyi Bari Raggaan oo dhowr jeer oo hore maxkamadda la soo taagay ayaa […]
Dowlada Masar oo ka carootay baaqa ku saabsan in la baaro geerida Mursi
Qaramada Midoobay ayaa dalbatay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dhimashadii madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi,hayeeshee waxaa hadalkaas ka hortimid Xukuumadda Madaxweyne Cabdulfatax Al-Siisi. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warrantay in afhayeenka Wasaaradda Arrimha Dibadda uu “erayada ugu culus” ku cambaareeyay talada ay soo jeedisay Qaramada Midoobay, wuxuuna ku adkaystay in Mursi uusan […]
Meydka Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamad mursi oo la’aasay
By admin on 18/06/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi ayaa lagu aasay magaalada Qaahira saacado uun ka dib markii uu si lama filaan ah ugu dhintay maxkamad dhexdeed. Qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa ayaa aaska ka qaybgalay. axaa loo diiday in ay maydka qaataan si ay ugu aasaan deegaankii uu ku dhashay bulshaduna uga qayb qaadato aaskiisa. […]
By admin on 17/06/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Ilaa sadex ruux ayaa si gooni loogu karantiilay kadib markii dadkaasi looga shakiyay inay la xanuunsan yihiin caalaamadaha cudurka waayadaan dambe ku baayay Qaarada Africa ee Ebola, waxaana Sadexdaan qof lagu hayaa Isbitaalka magaalo madaxda Ismaamulka Kericho ee Kericho. Sayga qofka dumarka ah ee lagu arkay calaamadaha cudurka iyo labo qof oo kale ayaa habeenkii […]
Isniin-June-17-2019(HNN) Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa qaabilay Maamulaha Guud ee Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Maraykanka (USAID) Mudane Mark Green iyaga oo si wadajir ah ugu dhawaaqay dib u hawlgelinta Xarunta USAID ee Soomaaliya oo la xiray sannadkii 1991-kii. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Mudane Mark Green ayaa ka […]
Garsoorka gobolka Hiiraan oo la kala diray
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa wareegto u soo saaray ku kala diray xubnihii garsoorka gobolka Hiiraan. Wareegtada ayaa lagu sheegay in markii madaxweynaha uu arkay baarida loo qabo dib u yagleelida hay’adaha garsoorka iyo dib u habeyntooda, marku arkay go’aanka guddiga cadaaladda baarlamanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, marku arkay talo soo jeedinta wasaaradda […]
Kooxda Chelsea oo ku guuleysatay Koobka Europa League
By admin on 30/05/2019 Arimaha Bulshada, Wararka Ciyaaraha HNN
Ciyaar xiiso badneyd ayaa xalay waxaa ay dhexmartay kooxaha Chelsea iyo Arsenal oo ka wada dhisay dalka Ingiriiska,waxaana ciyaartaas 4-1 ku guuleystay Kooxda Chelsea. Ciyaartaas ayaa ka mid aheyd Ciyaaraha koobka Europa League,waxaana xilli ciyaareedkan 2018-19 ku guuleystay Naadiga Chelsea. Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Chelsea iyo Arsenal ku kala nasteen barbaro 0-0 […]
AL-shabaab Oo Ku Dagaalamay Gobolka Gedo Qeybo Kamida
Wararka ka imaanaya Gobalka gedo ayaa sheegaya in dagaal culus uu dhexmaray dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo Sarkaal la sheegay inuu ka goostay Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanka Buusaar iyo dagmada Ceelwaaq ee Gobalka Gedo. Sarkaalka baxsadka ahaa ayaa ku soo wajahnaa dhinaca dagmada Ceelwaaq oo uu doonayey inuu […]